Ka anyị na-amalite ileghachi anya azụ n'afọ gara aga, ekwenyere m na ọ dị mkpa ịnweta nkọwa doro anya nke usoro atụmatụ ịzụ ahịa na-eto… ma na ewu ewu na nsonaazụ. Ọ dịkwa mkpa ịmata usoro ndị nwere ndị ahịa na-agba agba gburugburu ma ọ bụghị na-ebute nsonaazụ ha na-achọ ma ọ bụ dị mkpa.
Ighaghachi azụ - Otu n'ime ihe ndị ọzọ na-arụ ụka na ndị a ma ama na 2012 na-akpọsa nke ahụ SEO anwuola. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-ahụ maka SEO na-apụ apụ mgbe ha gụsịrị aha ahụ, ndị ọzọ ghọtara na Google wepụrụ kapeeti mebere n'okpuru ha ma na ha ga-akwụsị ịnwa ịghọ aghụghọ na algọridim ahụ wee bido iji ahịa ha na-eme ka ikike njikwa ikike ha. Ọ dị mma maka Google na ezigbo riddance na SEO backlinkers.
Koodu QR - biko gwa m na ha anwụọlarị. A na-enwekarị ọganihu teknụzụ nke na-egosi na ọ bụ nnukwu azịza anyị nwere ike itinye na azụmaahịa. O bu ihe nwute, n'uche nke m, koodu QR abughi otu n'ime ha. Anyị nwere ihe a dị ịtụnanya a na-akpọ Intanet nke na-eme ka ọ dị mfe ịpịnye URL ma ọ bụ okwu ọchụchọ ma chọta ihe ọ bụla ịchọrọ. Oge m buputara ekwentị m, mepee ngwa nyocha QR m, ma mepee ma gaa URL ahụ… Enwere m ike ịde ya na koodu QR abụghị naanị abaghị uru, ha jọrọ njọ. Achọghị m ịhụ ha na m ahịa ihe. Ihe ngwọta ka mma bụ URL dị mkpirikpi, ederede shortcode na ịnweta njikọ na nzaghachi, ma ọ bụ naanị ịnwe ọmarịcha URL na saịtị gị iji mee ka ndị mmadụ mara ịga nleta.
email Marketing - Ahia ọ bụla aghaghi inwe mmemme email. Ọnụ ego ọ bụla ị nwetara site na email ka bụ nke kachasị ike ma e jiri ya tụnyere atụmatụ ahịa ọ bụla. Ekwenyere m na irere email bụ onye emeriri n'agbanyeghị, n'ihi na ọ naghị aga n'ihu. Anyị ka ga-ahazi ndozi okpokoro afọ iri abụọ n'ihi enweghị ọganihu site na nnukwu ndị na-eweta ngwa igbe dị ka Microsoft Outlook. O yiri ka ọ ga-adị mfe ịmegharị email, na-enye ụzọ maka ozi onwe, mgbasa ozi, na ozi nzaghachi.
Mobile Marketing - enwere obi abụọ ọ bụla na oke mmụba na nnabata nke smartphones na ịnweta Internetntanetị. Plain na mfe, ma ọ bụrụ na ị naghị arụ ọrụ na weebụ mkpanaka, ngwa ngwa ngwa na ọbụlagodi ederede ederede ederede, ị na-egosi akụkụ dị mkpa nke ahịa ahụ. Otu onye dee na nke a… M na-eleta ndị mụrụ m ala na Florida ugbu a na ha dị nnọọ zụta iPhones. Mgbe ị na-eche maka onye na-eji teknụzụ eme ihe, enwere m ike ịgwa gị na ọ bụghị ndị mụrụ m.
Marketingzụ ahịa - Usoro mgbasa ozi dị iche iche nwere ike ịbụ ọnụ ala maka onye na - ekiri ya, mana enweghị ụdị mmetụta njikọta onye nwere mmetụta nwere. Anyị nwere nkwado na blọọgụ a na - enweta nsonaazụ dị egwu - mana uru ya karịrị pịa. Anyị na ụlọ ọrụ ndị ahụ na-arụ ọrụ na atụmatụ nke aka ha, anyị na-etinye akụkọ gbasara ha na nkwupụta okwu na nkwupụta anyị, anyị abụrụla ndị na-ekwuchitere mpụga maka ngwaahịa na ọrụ ha. Anyị nwere mmetụta na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ teknụzụ ahịa ndị a dị njikere itinye ego na ndị na-ege anyị ntị. Nnukwu ngwa ọhụụ dị ka Obere Nnụnụ nye ngwa iji chọta na ịchọta ndị a na-ege ntị na ndị na-emetụta ha.
Aha oma m -eto eto is Twitter. Ana m ahụ ọtụtụ okwu ndị ọzọ gọọmentị, okpukpe, ụmụ akwụkwọ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ekwu banyere iji Twitter eme ihe n'ụzọ dị irè iji gwa ndị mmadụ okwu (ihe ezubere maka ya Pope.) Twitter dị ọbụna imekọ ihe na Nielsen na-enye ntinye aka maka mgbasa ozi ọdịnala.
Tags: njikọ azụbacklinkscontent Marketingihe gbara ya gburugburuemailemail Marketingfacebook mgbasa ozigoogle +mmetụtaVidio AhịaMobile na Mbadamba ụrọahịa efuKoodu QRTwitterAhịa Twitter